Nei uchimanikidza kugadzira imwechete-chidimbu jekiseni rakaumbwa TPE mota mata?
Auto Zvikamu & zvishongedzo
Mota Mats yeHonda
Mota Mats yeNissan
Mota Mats yeToyota
Mota Mats yeVolvo
Mota Mats for Bmw
Mota Mats yeDodge
Mota Mats yeVolkswagen
Mota Mats ye Chevrolet
Mota Mats EGMC SIERRA & SKODA
Mota Mats YEMAHARA & AUDI
Mota Mats yeHyundai
Mota Mats yeFord
Mota Mats yeMazda
Mota Mats yeJeep
Mota Mats eSubaru
Mota Mats EBENZ & RENAULT
Mota Mats yeTesla
Motokari Trunk Mat
Mota Yekunze Yekushandisa
YEMAHARA Tesla Model Y
Ye Chevrolet Silverado Super Crew
Ye Ford F150 Super Crew
ZveToyota 4 Mumhanyi
China yakagara ichinzi fekitori yenyika. Nekuvandudzwa kwesimba rakazara rehupfumi reChina, mukana mukuru wemusika waita kuti musika weChinese uve unofanirwa kuona-zvigadzirwa zvemarudzi ose Makambani emarudzi mazhinji uye zvigadzirwa zvepasi rose zvakamhanyira kumusika weChina ndokusimudzira indasitiri yekuChina yemotokari. Nekuvandudza indasitiri yekupa, iyo World Factory Auto Network inogamuchira mhando dzeChinese zvigadzirwa zve auto. China yave nzvimbo yekuunganidzira zvigadzirwa zvepasirese zvemota uye yave chinzvimbo chikuru chevatengi vekunze.
Nekusimudzira kwekushandisa auto, iyo auto inopa musika inodawo chizvarwa chitsva chezvigadzirwa zvekutevera. Isu takazivisa TPE jekiseni kuumbwa kwenzvimbo-inoshamwaridzika tsoka padhi, uye takabereka iyo yeGerman neAustria TPE mota tsoka tsoka, ichiunza hutano uye hwakachengeteka kutyaira ruzivo kune varidzi vemota!
Chekutanga pane zvese, ngatitaurei nezve musiyano uripo pakati pejekiseni kuumbwa kwemaitiro uye blister maitiro:
1: Misiyano mune mbishi zvinhu
Iyo jekiseni kuumbwa maitiro inoda kuvandudzwa ne100% yakachena TPE zvinhu, uye iyo blister maitiro inowanzo sanganiswa neTPO kana TPV-senge TPE makomputa, uye kuchena kweblister hakuna kunaka senge jekiseni kuumbwa. Naizvozvo, iyo-chidimbu jekiseni-rakaumbwa izere TPE mota mat ichave neyakawedzera kusanduka kugadzirwa, padhuze nerabha, uye nani tsoka inzwe. Zvigadzirwa zvakagadzirwa ne blister tekinoroji zvakaoma, zvakafanana nepurasitiki, uye zvinonzwa kuneta kana uchityaira rwendo rurefu.
2: Musiyano mukugara
Iyo jekiseni rakaumbwa TPE tsoka pad ine kusimba. Mushure mekuremara mune yakazotevera nguva yekushandisa, inogona kudzoreredzwa pachimiro chayo chepakutanga nekudira mvura irikufashaira kana kuiisa kuzuva kwenguva yakati rebei.
DEAO mota mat deformation bvunzo: dzoreredza chimiro chepakutanga mushure memaawa akati wandei ekuratidzwa.
Blister pads inozopeta mushure memakore 1-2 ekushandisa uye haigone kudzoreredzwa.
Musiyano wehunhu pakati pezviviri unobva ku:
The mbishi zvinhu jekiseni Kuumbwa kwacho vari pelletized kupinda jekiseni Kuumbwa muchina uye liquefied panguva mukuru tembiricha asati kuumbwa kupinda chakuvhuvhu.
Iyo blister maitiro ndeyekutanga kugadzira iyo ficha muflat sheet, uye wozoipisa kuti inyorove uye kuipinza muforoma kuti itonhore uye kuumbika.
Chigadzirwa chakaenzana nejekiseni chine chimiro chechigadzirwa pachacho, nepo blister chigadzirwa chine chete divi rechimiro chakaumbwa, uye iko kupora kwepanyama kwakaderera zvakanyanya pane kwekare.
Blister mota mateti evaridzi vemota.
3: Musiyano mukugadzira dhizaini
Kubatsira kwekushandisa zvakapetwa-zvakapetwa yakakosha jekiseni muforoma ndeyekuti iko kwemavara magadzirirwo anogona kugadzirwa zvakanyanya, zvichipa vagadziri nzvimbo yekugadzira.
Isu takagadzira yakasarudzika machira echiratidzo chimwe nechimwe, uye ruzivo rwacho rwakapfuma, uye yega yega dhizaini ine modelling patent kuseri kwayo.
Iyo blister mold inogona kungoita mitsara yakapusa, yakafanana.
4: mutsauko mukushomeka dhizaini
Iyo yakapetwa-yakapetwa bhureki yakagadzirirwa neiyo jekiseni kuumbwa maitiro inogara yakasimba. Iyo yepasi petsoka padhi yakagadzirwa neakawedzera anti-deformation stiffeners. Iyo bhakoro zvakare jekiseni rakaumbwa kubva kune diki yepamusoro-chaiyo mold, iyo yakasimba.
Nekudaro, iyo blister maitiro inenge yakatetepa. Kana iyo yakapetwa-yakapetwa bhureki yakagadzirirwa, kusimba uye kusimba kwemotokari mat bvunzo huru. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei vese mhiri kwemakungwa blister mota matsiki vasina dhizaini dhizaini dhizaini.
Chekupedzisira, nei Deao achisimbirira kugadzira imwechete-chidimbu jekiseni rakaumbwa TPE mota yemotas?
Nekuti DEA yakagara iine hupfumi hwechiitiko mukusimudzirwa kwemateeti epakutanga emota! Tinoda kuunza mateki emota ari nani kune vazhinji varidzi vemota. Chete mota fekitori-chikamu chakabatanidzwa jekiseni-rakaumbwa izere TPE mota mateki anogona kuunza zvechokwadi zvakatipoteredza zvine hushamwari uye hwekunze-husina kutyaira ruzivo.
Post nguva: Nov-24-2020